Apple inoshandisa maChinese maseva kutamisa iCloud masevhisi | IPhone nhau
Zvinotaridza sekunge kwechinguva izvozvi izvo zveCupertino vari kuita kufamba pamasevhisi emakore inopihwa nekambani. Rwazvino ruzivo rwakanangana nekufamba uku rwunobva kuChina. Sekureva kwaDigiTimes, iyo China-based kambani Inspur yaizove nemavhoti ese ekutora iCloud services kubva kune vashandisi veiyo Cupertino-based kambani
Parizvino Amazon ndiyo iri kutonga ese maApple maseva uye masevhisi mugore kuburikidza neAmazon Web Services (AWS). Asi kambani iri kuyedza kuchengetedza mari pamhando idzi dzesevhisi (zvino chii chichaitika chichaitika uye kana isiri nguva) kubvira nguva yega yega izvo zvinodikanwa zvekambani zvese zvikuru sevashandisi, kunyanya mushure mekuburitswa kwegore rapfuura rezvitsva zvirongwa zvekuchengetedza ICloud pakati pevashandisi.
Inspur parizvino inokwanisa 60% yemaseva egore mumusika weChina. Akamboshanda neMicrosoft, Intel, IBM, mamwe makambani ehunyanzvi aitsvaga wedzera ako ekuchengetedza masisitimu. Sekureva kwaDigiTimes, Inspur angadai akatosangana muCupertino nevatungamiriri vepamusoro ve manejimendi eruzivo muApple gore, pamwe nemaneja wepamusoro wekambani, Tim Cook. Semazuva ese, Apple kana Inspur havana kusimbisa kana kuramba nhau idzi, asi sosi dzekugadziriswa kwese uye zvine chekuita nekutaurirana zvinosimbisa kuti micheto midiki chete ndiyo inosara munhaurirano dzinenge dzave pedyo nekuvhara.
Mwedzi wapera Apple yakasaina chibvumirano neGoogle, chakakosheswa pakati pemamiriyoni mazana mana nemazana matanhatu emadhora, ku tora chikamu chezvivakwa zviri kuendeswa neAmazon parizvino kuburikidza nerayo gore masevhisi. Apple ine nzvimbo dzedata muIreland, Denmark, Reno, Arizona uye parizvino iri kuvaka imwe muOregon.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Apple kushandisa maChinese maseva kutama iCloud masevhisi